Ku hagaaji faaiidadaada istiraatiijiyadda dib u celinta vfxAlert | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyada dib-u-celinta vfxAlert: calaamadahayada, faaiidadaada
Sidee ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah u shaqeeyaa calaamadaha? Iyagu ma waxay noqon doonaan wax ku darsada istiraatiijiyaddaada gaarka ah, mise lacagta ayaa khasaartay? Su'aalaha noocan oo kale ah ma weydiiyaan oo kaliya kuwa bilowga ah laakiin sidoo kale ganacsatada xirfadleyda ah ee laba-geesoodka ah. Adeegga calaamadda vfxAlert ee fiidiyowgaan wuxuu ku tusi doonaa istiraatiijiyaddiisa dib u noqoshada.
Tusmada Awoodda Qaraabada (RSI) - oscillator-ku wuxuu qiimeyn doonaa isku dheelitirka hadda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha: saadaaliyaha ka sarreeya heerka 80 - dhammaadka kor u kaca (xad dhaafka ah), ka hooseeya 20 - dhammaadka hoos u dhaca ( kormeerka).
80 iyo 20, heerarka "caadiga ah" ee RSI. Ikhtiyaaraadka ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ka socda vfxAlert wuxuu adeegsadaa qiyamka 70 iyo 30. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si sax ah u go'aamiso runta dib u noqoshada: calaamadda ugu horreysa waxay noqon doontaa ka bixitaanka aagagga 80/20, ka dibna xaqiijinta vfxAlert.
Ikhtiyaar u kac (WAC). Saddex dhibcood oo ka mid ah Parabolic SAR oo ka hooseeya qiimaha, RSI ayaa si toos ah loogu jiheeyaa aagga kormeerka;
FALL (PUT) option. Xaaladaha soo noqnoqda: seddex qiimeyaal Parabolic ah oo ka sarreeya jaantuska, RSI oo ka hooseysa aagga xad dhaafka ah.
Xaaladda furitaanka ikhtiyaarka: 7-dii qiime ee hore waa inay ahaadaan dhinaca ka soo horjeedka shaxanka Parabolic SAR ama ka baxsan aagagga xad-dhaafka / iibka badan ee RSI.
Fur ganacsi shumaca xiga ka dib calaamadaha binary. Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa in aysan ka yarayn 7-10 daqiiqo xitaa haddii waqti shaqeed ahaan la doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena.
Xitaa waqtiga daqiiqadaha, RSI marar dhif ah ayey tagtaa aagagga daran waxaadna seegi kartaa waxyaabo badan oo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah . Haddii Parabolic SAR iyo RSI ay bilaabaan inay u dhaqaaqaan hal jiho - waad furi kartaa ikhtiyaar!
In kasta oo ay suurtagal tahay in la ganacsado maalinta oo dhan, calaamadaha ugu kalsoonida badan waxay noqon doonaan qeybta labaad ee fadhiga Mareykanka (laga bilaabo 16: 00 UTC) iyo dhammaadka kalfadhiga Aasiya (illaa 06:00 UTC). Inta lagu jiro xilliyadan, waxaa jira isbeddello sarreeya iyo isbeddello badan oo isbeddel ah.
Intii lagu guda jiray daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka, ma fureyno xulashooyin 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda; ganacsatada taxaddarka leh way xiri karaan heshiisyada hadda socda. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan isticmaalnaa jadwalka dhaqaalaha ee ku jira dhammaan meheradda ganacsiga binary ee caanka ah.
Marba marka ka sii dambeysa dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa ah uu sii socdo, waxaa sii kordheysa suurtagalnimada isbeddel xoog leh ka dib dhammaystirkiisa. Xaaladaha noocaas ah, waxaad furi kartaa meheradaha calaamadaha ugu horreeya ee dib-u-celinta Parabolic SAR iyo calaamadaha binary ee xoogan ee ka imanaya vfxAlert;
Aan soo koobno . Markaad ka fekereyso sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarka ikhtiyaari ikhtiyaari ah , marka hore go'aan ka gaar hantida ay noqon doonto calaamadaha. Adeegga vfxAlert wuxuu si joogto ah u hagaajiyaa algorithms ee macaashka xasilloon ee dhammaan lamaanaha lacagaha iyo cryptocurrencies, laakiin ganacsaduhu wuxuu go'aamiyaa kuwa loo adeegsanayo istiraatiijiyadiisa. Xusuusnow, calaamaduhu waa talo bixin oo kaliya adeeguna mas'uul kama aha khasaaraha.